မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေ တက်နေလား မပူပါနဲ့ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြားရှိရင် အလွယ်တကူ ပျောက်အောင်လုပ်နည်း… - ThutaSone
January 17, 2020 ThutaSone ဗဟုသုတအစုံ 0
မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေ တက်နေလား မပူပါနဲ့ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြားရှိရင် လွယ်ကူပါတယ်…
မီး ပူ ဖင် မှာ ဂျီး တွေ တက် နေ လား မ ပူ ပါ နဲ့… ပါ ရာ စီ တ မော့ (၂) ပြား ရှိ ရင် လွယ်ကူပါ တယ် ဗျ… လက် တွေ့ လုပ် ကြည့် လိုက် ပါ နော် … ။
ဂျီး တွေ ပေ နေ တဲ့ အ ပေါ် မှာ ဆေး ပြား လေး တင် ထား မီး ပူ ကို အ ပူ နည်း နည်း ပဲ ထား ခ န နေ အ ရည် ပျော် ကြ ကုန် ပီး တစ် ရှူး အ ကြမ်း လေး နဲ့ ပွတ် လိုက် ရင် မီး ပူ မှာ ကပ် နေ တဲ့ ဂျီး တွေ အ ကုန် ပြောင် ကုန် တာ ပါ ပဲ …. ။
အိမ် မှာ လက် တွေ့ စမ်း ကြည့် နော်
ကဲ မ လွယ် ဘူး လား… ကိုယ် သိ သ လို အ များ သိ အောင် မျှ ဝေ share ပေး ပါ
မီးပူဖင္မွာ ဂ်ီးတြေ တက်နေလား မပူပါနဲ့ ပါရာစီတေမာ့ (၂)ျပားရွိရင် လြယ္ကူပါတယ်…
မီး ပူ ဖင် မွာ ဂ်ီး တြေ တက် နေ လား မ ပူ ပါ နဲ့… ပါ ရာ စီ တ မော့ (၂)ျပား ရွိ ရင် လြယ္ကူပါ တယ် ဗ်… လက် တြေ့ လုပ် ကြည့် လိုက် ပါ နော် … ။
ဂ်ီး တြေ ပေ နေ တဲ့ အ ပေါ် မွာ ဆေျးပား လေး တင် ထား မီး ပူ ကို အ ပူ နည်း နည်း ပဲ ထား ခ န နေ အ ရည် ပေ်ာ် ကြ ကုန် ပီး တစ် ရှူး အ ကြမ်း လေး နဲ့ ပြတ် လိုက် ရင် မီး ပူ မွာ ကပ် နေ တဲ့ ဂ်ီး တြေ အ ကုန်ျေပာင် ကုန် တာ ပါ ပဲ …. ။
အိမ် မွာ လက် တြေ့ စမ်း ကြည့် နော်
ကဲ မ လြယ် ဘူး လား… ကိုယ် သိ သ လို အ မ်ား သိ အောင် မွ် ဝေ share ပေး ပါ